MSF oo xirtey mashruuceedii caafimaadka ee degaanka Xaawo Cabdi iyada oo mar kale xaqiijineysa in ay taageereyso dadka Soomaaliyeed - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Kooxaha MSF ayaa xirey mashruucoodii caafimaadka ee degaanka Xaawo Cabdi ee dalka Soomaaliya, oo ku yaalla meel ka baxsan caasimadda Muqdisho, horraantii Sebtembar, taas oo calaamad u noqotey dhammaadkii iskaashigii ka dhaxeeyey Drs Xaawo Cabdi iyo MSF. Saddexdii sano ee la soo dhaafey, MSF waxa ay ka shaqeyneysey waax bukaan-socod, waax bukaan-jiifka carruurta ah, iyo xarun daaweynta daacuunka iyo shubanka ah iyo barnaamij nafaqeynta ah oo ay ka fulineysey degaanka Xaawo Cabdi waxaana sidoo kale ay qaybineysey biyo nadiif ah iyo agab kale sida bustayaal iyo bacaha fidsan. MSF waxa ay ka mahadcelineysaa taageeradii ay qoyska Xaawo Cabdi na siiyeen saddexdii sano ee aan wada shaqeyneyney.
Muddadii saddexda sano ahayd ee ay waddey hawlaha nafaha lagu badbaadinayo waxa ay MSF in ka badan 8,000 oo carruur ah ku qaabishey barnaamijka degdegga ah ee quudinta. Intii u dhaxaysey 2007dii ilaa 2010ka, MSF waxa ay la-talin iyo daaweyn lacag la’aan ah siisey 330,140 qof waxaana ay 29,027 carruur ay hayso nafaqo-xumo oo ay da’doodu ka hooseyso shan sano jir ah ku daweysey barnaamijkeeda quudinta bukaan-socodka ee ku yaalla degaankaas u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Dhammaadkii bishii Agoosto 2009kii, markii ay kor u kaceen xaaladaha cudurka jadeecada ee degaanka, kooxaha MSF waxa ay fuliyeen olole tallaal oo ballaaran, iyaga oo tallaaley 31,785 carruur ah. Muddada saddexda sano ah, MSF waxa ay qaybisey 180 milyan oo litir oo biyo nadiif ah waxaana ay bixisey alaabo sida bacaha fidsan iyo bustayaal iyada gargaarkaas gaarsiisey in ka badan 50,000 qoys.
Kooxaha MSF waxa ay wadaan taageerada ay siinayaan cusbitaalka bulshada ee Afgooye halkaas oo adeegyada umulaha iyo uurreyda iyo kuwa bukaan-jiifka, la-talinta bukaan-socodka iyo barnaamij quudinta bukaan-socodka carruurta ka yar shan sano jirka lagu bixiyo. MSF waxa ay si dhow ula soconeysaa xaaladda caafimaadka ee degaanka waxaana ka go’an in ay adeegyadeeda nafaha lagu badbaadinayo ay ka sii waddo Waddada Afgooye.
Ilaa horraantii 2007dii ayaa Waddada Afgooye waxaa soo degey in ka badan 300,000 oo qof oo barokacayaal ah, kuwaas oo badiba ka yimid Muqdisho, dadkaas oo weli ah kuwo qaba baahiyo bani’aadamnimo oo aad u ballaaran kuna nool degaan degaansho-xumo weyn ay ka jirto. Médecins Sans Frontières (MSF) waxa ay ka shaqeysaa toban gobol oo Soomaaliya ka mid ah , iyada oo in ka badan 1,300 oo shaqaale Soomaali ah ay degaannadaas ka bixiyaan daryeel caafimaad. Malaayiin qof ayaa degdeg ugu baahan daryeel caafimaad, haddana farqiga weyn ee u dhaxeeya baahiyaha Soomaalida iyo waxqabadka bani’aadamnimada ayaa weli ah mid sii ballaaranaya..
MSF waa urur caafimaad oo madax-bannaan oo mashaariic ka fulinaya toban gobol oo Soomaaliya ka tirsan. In ka badan 1,300 shaqaale Soomaali ah, oo ay taageerayaan in ka badan 100 shaqaale ah oo jooga Nayroobi, Kenya, ayaa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta qaaxada iyo nafaqo-xumada, qalliin, iyo biyo iyo agabka gargaarka siinaya dadka barokacay. MSF dowladna kama qaadato wax maaliyad ah oo ay ku fuliso mashaariicdeeda ay ka waddo Soomaaliya, iyada oo gebi ahaanba ku tiirsan deeqaha ay ka hesho shakhsiyaadka caadiga ah ee dunida dacalladeeda kala duwan ku nool.
MSF waa urur bani’aadamnimo oo caafimaad oo caalami ah, kaas oo daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah Soomaaliya oo dhan ku siiya dadka iyada oo aan loo eegin qabiilka ay yihiin ama siyaasadda ay u janjeeraan.
MSF waxa ay daryeel caafimaad oo nafo lagu badbaadiyo ay dadka Soomaaliyeed siineysey tan iyo 1992dii waxaana ay maanta sii waddaa gargaarka ay kumanaan qof ku siineyso dalka oo dhan, taasna waxaa mahaddeeda leh shaqaalaheenna dadaalka iyo dhiirannaanta badan ee Soomaalida ah ee wada mashaariicdeenna.
Tags: Afgooye, Gobolka Shabeelaha Dhexe, Mashrruc xirid, shabeelaha hoose, Xaawa cabdi